Madaxweynaha Liibiya Korneel Mucamar Al qadaafi oo sheegay in uu doonayo wdahadal. – SBC
Madaxweynaha Liibiya Korneel Mucamar Al qadaafi oo sheegay in uu doonayo wdahadal.
Posted by editor on April 30, 2011 Comments
Korneel Mucamar Al qadaafi ayaa saaka oo sabti ah khudbad uu ka jeediyay taleefishinka dalkaasi uu kaga dalbaday Ciidamada isbahaysiga Nato in ay joojiyaan duqaymaha ay Ciidamadiisa la beegsnayaan.
“Anagu idinma duqayn,badana kama aanu soo gudbin,maxay tahay sababta aad noo duqaynaysaa”,waxaa hadalkaasi yiri korneel Qadaafi isaga oo fariin wadahadal u jeedinaya isbahaysiga Nato.
Mucamar Al qadaafi waxaa uu sheegay in ay diyaar u yihiin wadahadal,iyadoona uu xusay in aanu marna qaadanayn talooyinka ay reer galbeedku ugu soo jeedinayaan in uu xukunka ka dego,waxaana uu yiri noo yeerinmaysaan mustaqbalka dalkayaga.
Taleefishinka Dowlada ayaa laga soo xigtay in intii uu khudbada ku jiray Qadaafi ay duqayno kusoo dheceen dhisme ku dhow goobta uu ka khudbaynayay,waxaana taleefishinku sheegay in ay duqaynadaasi ka yimaadeen dhanka Ciidamada isbahaysiga Nato.
“wadahadal ayaan idin la galaynaa,idinka ayaa ah dowladaha na weeraraya,hadii doonitaankiinu yahay shidaalka,waanu idin soo dhoweynaynaa,waana idin la hadlaynaa,wax dhib ahna kuma jiro” Korneel Qadaafi ayaa hadalkaasi yirin isaga oo ku celcelinaya wadahadal.
Hadalka Mucamar Al qadaafi ayaa imaanaya xili sarkaal sare oo ka tirsan Ciidamada Nato uu beeniyay in Ciidamada Korneel Qadaafi ay gacanta ku dhigeen Magaalada Misrata oo maalmihii aynu soo dhaafnay ay dagaalo ka socdeen.
qadaafi taas mar hore ayaa lagaa rabay …………….goortaad shacankaagii baabi isay ayaad sas leedahay …………